Maxaad u Dooratay Mareykanka?
Qiimaha alaabta ceeriin ee dharka ayaa kordhay dhammaan, sidee ku saabsan suuqa hoos yimaada silsiladda oo dhan ee sii kordheysa?
Tan iyo qeybtii labaad ee sanadkii hore, oo ay saameeyeen arrimo ay ka mid yihiin yareynta awoodda iyo xiriirka adag ee caalamiga ah, qiimaha alaabta ceyriinka ah ayaa sare u kacday. Ka dib sanadka cusub ee Shiinaha, "kororka qiimaha" ayaa mar kale kor u kacay, iyadoo koror ka badan 50% "laga soo bilaabo" ...
DADKU WAXAY LEEYIHIIN Qeyb badan oo ilkaha ah xagaaga?
Dadku waxay ku raaxaystaan ​​xirashada A gym tee, waa qaab shaati dhar ah oo loogu magac daray qaabka T ee jirkiisa iyo gacmo gashi. Dhaqan ahaan, waxay leedahay gacmo gaab iyo silsilad wareegsan, oo loo yaqaan qoorta shaqaalaha, oo aan lahayn qoorta. T-shaati-yada guud ahaan waxaa laga sameeyaa maro fidsan, mid fudud oo qaali ah waana fududahay t ...
Sidee loo waafajiyaa hoodies adoon caruurnimo iyo qurxan aheyn?
Waxaa la sheegaa in dhididka ay leeyihiin “saddex iyadoo aan loo aabayeelin” Iyadoo aan loo eegin da'da Ragga iyo dumarka, yar iyo weyn Si kasta ha noqotee qaabka Taas macnaheedu waa, dhididku waxay qancin karaan qof walba dharkiisa maalin kasta, Waxaad ka dhigi kartaa mid fudud oo hooseeya, ama waxaad ka dhigi kartaa mid casri ah iyo mood; Ama gadaal, ar ...
Isbeddellada iyo qaababka moodada Sweatshirts ee 2020-2021！
Waxaan xirnaa shaati-gacmeed maalin kasta. Fikrado cusub oo ku saabsan xirashada dharka dhididka… Badanaa dumarka waxaa soo jiita noocyo dhar ah oo wax ku ool ah oo dhinacyo badan leh oo lagu dari karo waxyaabo kale oo badan xilligii la qabtay. Qaybtani waxay ka kooban tahay dhididka dumarka iyo hoodies, sawirradooda oo ...
Waxay kululeysaa jirkaaga! Jarmalku wuxuu sameeyay hoodie saynis iyo tikniyoolajiyad madow taas oo ka beddeli karta US $ 200 dharka lacagta lagu shubo!
Xilliga dayrta horraanta iyo xilliga qaboobaha, Waxay u eg tahay dadka inay xirtaan hal-xidho halkii ay ka qaadan lahaayeen funaanad dhogorta leh, taas oo aan ahayn mid culus ama weyn, laakiin waxay keeni kartaa diirimaad iyo fudeyd. Ma laha timo dabacsan oo fiiqan ka dib marka la maydho, waxaad ku xidhan kartaa lebbiska ay iyagu iska leeyihiin oo aad u bixi kartaa adiga oo aan ka fikirin. ...
Isbedelada dhididka ee 2021 iyo hoodies halkan waa？
Dadku waxay ku raaxaystaan ​​xirashada hoodies iyo dhidid. Qaarkood waxay dareemaan wax weyn marka loo eego midka gaaban, Qaar waxay jecel yihiin xxxl nasasho iyo qaabab dhaadheer waana ay caan ku yihiin suuqa. Ku laalaadashada dhowr hoodies oo ku lebbisan dharkayaga ayaa saameyn weyn ku leh qaabkeenna labbiska iyo dabeecaddeenna. Hada, DUFIEST wuxuu shaaca ka qaadayaa ...
Warshadaha dharka ayaa waxbadan iska badalaya. Ma ka warqabtaa?
Shaki la'aan, IT-da ayaa ah 10-ka sano ee ugu adag warshadaha dharka 10-kii sano ee lasoo dhaafay, noloshii ugu horreysay ee ganacsiga korontada tafaariiqda tafaariiqda, illaa sanadihii la soo dhaafay, in yar oo ku kala firirsan dhammaan shirkadaha warshadaha dharka ayaa kobaca iibka, 90% shirkadaha waa kujiraan, bu ...
Sawir fudud oo shaqsiyeed - qaabka ragga
Waraaqaha Waxyoonku waa mid ka mid ah qaababka ugu kala duwan qaababka, weedh gaagaaban, sumadda LOGO, isku-darka garaafyada iyo qoraalka; Naqshadeynta shaqsiyaddan qandaraaska shaqsiyeed inta badan waxay leedahay micnaha muujinta tooska ah, ku dabaqo kor u qaadista nashqadda “qalinka tilmaamaya eyeball” effe ...
Mustaqbalka dukaamada dharka leben-iyo-madaafiic? Afartan isbeddel, ayaa beddeli doona qaddarka dukaankaaga dharka!
Waa maxay nooca ugu dambeeya ee tafaariiqlayaashu? Habka dakhliga iyo qaabka faa iidada tafaariiqleyda isma badalin tan iyo Kacaankii Warshadaha. Haddii ay tahay in dukaamada jirku ay noolaadaan, waa in dib loo cusboonaysiiyaa ujeeddada kama dambaysta ah ee dukaan jireedna way ka duwanaan doontaa. 1） Ujeedada r ...
Hoodie waxaa laga sameeyay diirka rummaanka iyo gebi ahaanba bayoolajiga gra
Dhaqso badan ayaa ah hab fiican oo lagu tijaabiyo isbeddellada sida surwaalka vinyl-ka, dusha sare ee dalagga, ama kuwa muraayadaha indhaha yar yar ee '90s'. Laakiin si ka duwan qaababkii ugu dambeeyay, dharkaas iyo agabyadaasi waxay ku qaadanayaan tobanaan sano ama qarniyo inay ku daataan Nooca cusub ee dharka ragga ee Vollebak ayaa la soo baxay hoodie gebi ahaanba isku dhafan ...
Sidee u waarayaa dib-u-warshadaynta polyester?
Ku dhowaad nus ka mid ah dharka adduunka ayaa laga sameeyaa polyester-ka iyo Greenpeace oo saadaaliyay in lacagtaan ay labanlaabmi doonto sannadka 2030. Waayo? Isbedelka jimicsiga haddii mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ka dambeeya: tirada sii kordheysa ee macaamiisha waxay raadinayaan dhar fidin, dhar adkaysi badan. Dhibaatadu waxay tahay, polyester waa ...
Waa maxay khad biyo ku shaqeysiiya?
Waxaa qoray admin on 20-09-09
Waa maxay khad biyo ku shaqeysiiya? Khadka muujinta gabi ahaanba lama arki karo illaa uu taabto qoyaan ka yimaada biyaha ama dhididka. Mararka qaarkood, naqshadaha lagu daabacay khad biyo ku shaqeysiinaya ayaa la arki karaa oo keliya marka ay dharku qoyan yihiin. Markuu dharku qallalo, nashqaddaadu way baaba'aysaa, waxay diyaar u tahay inay bilowdo meertada oo dhan ...
Nagala soo xiriir Skype